खबरदार ! हामी आफ्नै सपनाको मलामी किमार्थ बन्दैनौ « Anumodan National Daily
खबरदार ! हामी आफ्नै सपनाको मलामी किमार्थ बन्दैनौ
द्वापर युगमा महाभारतको युद्ध सुरु हुनुका पछाडि धृतराष्ट्रको पुत्रमोह र दृष्टिहीन पिताको अन्धो मायाले उन्मत्त पुत्र दुर्योधनको हठ नै थियो । द्युतसभामा एक नारीको चिरहरण हुँदा समेत बोल्न नसक्ने सिंहासनमा विराजमान महाराजको कर्तव्यबिमुखताले नै एक सय पुत्रका पिताले आफ्ना सबै पुत्रसहित लाखौं आफन्तको लासमा एक्लैले दागबत्ति दिन विवश बनाएको ग्रन्थमा उल्लेख छ । यसले राज्य सञ्चालनका अधिकारी अन्यायी बन्दा देशबासीले रगतको आहालमा लत्पतिनुपर्ने विवशताको प्रतिकात्मक संकेत गरेको छ, महाभारतमा ।
हामी हाम्रा अहिलेका राज्य सञ्चालक अर्थात्, हाम्रा राजनैतिक अभिभावकहरूबाट त्यस्तो आशंका गर्न चाहान्नौं, तर खबरदारी भने गर्नै पर्छ । खबरदार ∕ हामी कलियुगका कम्युनिष्ट कार्यकर्ताहरूले धृतराष्ट्रले जस्तो हाम्रा सयौं सपनाको मलामी आफै बन्नु नपरोस् । यदि त्यसो भएमा हामीलाई त्यो कदापि स्वीकार्य हुने छैन । हामी बिद्रोहको माध्यमबाट पनि हामी हाम्रा सपनाहरू सजाई छाड्ने छौं ।
कार्यकर्ताहरूले जनतालाई बाँडेका सपना हामी पुरा भएको देख्न चाहान्छौं । ती सपनाहरूभित्र अहिलेका सबै तहका सरकारहरूले समानरूपले बिना व्यक्तिगत स्वार्थ जनताको हितमा काम गरेको एउटा सुन्दर वृत्तचित्र लुकेको छ ।
अपसोच ! आज संलिग्न लागेको नेपाली राजनैतिक आकाशमा अन्याय र असमानताको काला बादलरूपी धब्बाहरू देखिन थालेका छन् । हिजोका जस्तै मन्त्रीको क्षेत्रमाभन्दा एउटा सिंगो प्रदेशमा बजेटको आकार कमी देखिनुले भोलिको अँध्यारो पाटो उजागर मात्र गरेको छैन, जसरी द्युतसभामा १४ वर्षपछिको भयानक महाभारतको युद्धलाई दिव्य दृष्टिधारी बिदुरले महसुस गरेका थिए, त्यसरी नै अत्याचार र असमानताको अन्त्य भएन भने हामीले आजका सत्तासीन हाम्रै नेताहरूको राजनैतिक अवसान हाम्रै आँखाले देख्नु नपरोस् । अहिलेलाई हामी यत्ति कामना मात्र गर्न चाहन्छौं ।
संसदमा मेटमणि चौधरी, झपटबहादुर रावल लगायतका सत्तासिन दलकै युवा सांसदहरूले विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा उठाएका सवाल गम्भीर छन् । ती सवाल केवल उनीहरूको आफ्नो क्षेत्रमा बजेट विनियोजन नभएको झोंक मात्र होइन्, यसले युगौंदेखि असमानता र सौतेनी व्यवहार खेपिरहेको सुदूरपश्चिम, कर्णाली क्षेत्र लगायतका मुलुकका पिछडिएका क्षेत्रहरूमाथि नयाँ संरचनाको नेपालमा भएको विभेद र अत्याचारमाथिको तीव्र असन्तोष पनि हो । यसलाई केवल संसदीय दलको विधि र विधानको चौघेरा भित्रकै ‘अराजकता’ को पगरी भिराएर समाधान गर्न खोजियो भने त्यो पीडित जनतामाथिको थप अत्याचार हुनेछ । हामी हाम्रा नेताहरू, जसले अहिले सत्ताको बागडोर सम्हालेका छन्, उनीहरू सच्चिउन् भन्ने चाहान्छौं । हामी जनताले विद्रोहको त्यो द्वापर युगीन महाभारत लड्न नपरोस भन्ने चाहन्छौं र जनयुद्ध, जनआन्दोलन लगायत मुलुकका सबै भागमा भएका विभिन्न न्यायपूर्ण आन्दोलनले यो मुलुकको स्रोत र अधिकार माथिको समान हक तथा अधिकार र सहभागिता सुनिश्चित होस भन्ने चाहन्छौं ।
तर, बिडम्बना महाभारतका पात्रहरूको चरित्रको पुनरावृत्ति हाम्रो नयाँ शासन व्यवस्थामा हुनु विचित्र छ । बाबुको शारीरिक अपांगताको कमजोरीका कारण सत्ताच्युत हुँदाको पीडापछि बाबु धृतराष्ट्रको सत्तारोहण र आफ्नो उत्तराधिकारित्व हासिल गरिसकेपछि जसरी दुर्योधनमा दम्भ बढेको थियो, ठीक त्यसैगरी हामीले आदर्श मानेका रवीन्द्र अधिकारीहरूकै हातमा डाडुपन्यु रहेको पर्यटन मन्त्रालयको बजेट विनियोजनले उनीहरूको विगतको आदर्शलाई विनियोजनको दस्तावेजले ललकारी रहेको छ । र, प्रश्न गरिरहेको छ– तिमीहरूको काम गर्ने शैली पूर्व पञ्चायतका मन्त्रीको भन्दा कसरी भिन्न भयो ? के यसले समाजवाद ल्याउँछ ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको मुखबाट जपिने अखण्ड आर्थिक समृद्धिको अध्यायगानले मात्रै समृद्धिको बलियो जग निर्माण हुन सक्छ ?
सत्ता र शक्ति अस्थायी हुन्छ । हाम्रा पुराणहरूमा हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु जस्ता बलवान त्रिलोकका सत्ताधारीहरू समेत अहंकारले सत्ताच्युत भएको उल्लेख छ । बौद्धिकतामा कसैसँग तुलना नहुने र संसारमा कसैसँग नहार्ने बलशाली रावणको सत्ता समेत अहंकारले क्षय भयो । हाम्रै मुलुकमा समेत अन्याय र अत्याचारकै कारण राणा शासन इतिहासका पानामा सीमित भयो । राजाको दम्भ समेत जनताको शक्तिका अगाडि घुडा टेक्यो । सत्ताको अहंकार र घमण्ड नगरौयसले सधैका निम्ति सत्ता गुम्न सक्छ । जसरी आज काँग्रेस जस्तो पार्टी सबै प्रकारले सत्ताबाट बढारिएको छ ।
अहिलेको जनमतमा सबैको मिहिनेत छ । विशेष गरी पार्टी कार्यकर्ताहरूसँग यो मुलुकको समुन्नतिको सिंगो मृगतृष्णा बाँकी नै छ । कार्यकर्ताहरूले जनतालाई बाँडेका सपना हामी पुरा भएको देख्न चाहान्छौं । ती सपनाहरूभित्र अहिलेका सबै तहका सरकारहरूले समानरूपले बिना व्यक्तिगत स्वार्थ जनताको हितमा काम गरेको एउटा सुन्दर वृत्तचित्र लुकेको छ । त्यो वृत्तचित्र मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रको भन्दा ३० गुणा कमी बजेट विनियोजन भई उपेक्षित महसुस गर्ने सिंगो सुदूरपश्चिम र कर्णाली समेत आत्मसम्मान र गर्व महसुस गर्ने सुन्दर दृष्य अटाइएको छ । त्यसैले हामी हाम्रै अग्रज सत्तासिन नेताहरूमा सर्वप्रथम सविनय बिन्ती गर्न चाहान्छौं– हाम्रो सपनाको हत्या नगरिदिनुहोस् । हामी आफ्ना सुन्दर सपनाहरूको आफै मलामी बन्न सक्ने छैनौं । हामी हाम्रो राज्यमा समान सहभागिता चाहान्छौं । स्रोतको समुचित वितरण र समानता चाहन्छौं । यदि, बहुमतको दम्भका कारण सुदूरपश्चिम र कर्णाली लगायतका क्षेत्रमाथिको अत्याचार कायमै रहेमा त्यो विद्रोहका आमन्त्रण हो । आज मेटमणि र झपट रावलहरू संसदमा बोलेका छन् । भोलि यहाँका जनता घरघरदेखि उठेर सडकमा आउने अवस्था नआवस् । हामीले आधुनिक नेपाल चाहेका हौं । द्वापरकालीन महाभारत जस्तो बिनाशकारी बिग्रह हाम्रो चाहना होइन् । खबरदारी गर्न चाहन्छौं । सबैलाई चेतना भया ।